Dowlada Turkiga oo cambaareysay Qaraxyadi Muqdisho Ka Dhacay. – Hornafrik Media Network
Muqdisho-Hornafrik-Dowladda Turkiga ayaa cambaareeysay Weeradii Xalay ka dhacay Magaaladda Muqdisho oo ay kudhinteen ugu yaraan 30 Qof in ka badan 20 kalena ay ku dhaawacmeen.
“Ilaaleey Naxariistiisa ayaan u rijeeyneeynaa kuwa Naftooda ku waayay Weeradda, waxaan u tacsiyeeyneeynaa Qooysaska Dadkoodu ay Weeraradda ku dhinteen, caafimaad deg-deg ah ayaan u rijeeyneynaa kuwa ku dhaawacmay” aayaa lagu yiri War laga soo saaray Wasaradda Arrimaha Dibadda ee Turkey-ga.
Turkigu wuxuu joogteeyn doonaa garab istaaagiisa Doowladda Soomaaliya iyo Dadka walaalaheen Soomaaliyeed ah ee wajahaya Weeradda Argagixisadda” ayaa sidoo kale lagu xusay Warka laga soosaaray Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Turkiga.
Gawaari qarax lasoo saaray ayey Shalay Al-shabaab ku weerareen Goobo u dhow Xarunta dhexe ee Nabad Sugidda Qaran iyo Madaxtooyadda Soomaaliya.
Ciidamadda Amaanka ayaa ubabac dhigay Dagaalamayaal hubeeysan oo ka tirsan Al-shabaab kuwaas oo Tiradooda lagu sheegay Shan Ruux, ugu Dambeeyntii Ciidamaddu waxay toogteen Shantii Dagaalame ee Weerarka soo qaaday.
Dowladda Turkiga ayaa Noqotay Dowladdii ugu horreeysay ee Gar-gaarkii ugu badnaa u fidisay shacabka Soomaaliyeed markii ay la kulmeen Muusiibaddi 14 kii Octobar, Xilligaas oo 512 Qof ay isku goob u dhinteen.
Gurmad caafimaad oo dalka iyo Dibadda ah ayey Dowladda Turkigu ku caawisay Dadkii dhaawacyadda Daran ay kasoo gaareen Weerarkii 14 kii Octobar ee Sanadkii hore.
Al-shabaab ayaa Sheegtay Masuuliyadda Weeraradii shalay waxaayna tilmaameen in ay ku dileen Saraakiil Dowladeed.
Sidoo kale Al-Shabaab waxay sheegteen Weerarkii 28 October ee lagu qaaday Hotel ku yaala Degmadda Xamar weeyne, Balse waxay ka aamuseen Weerarkii lagu le’day ee isgooyska Zoobe ka dacay oo lagu eedeeyay in ay masuuliyaddiisa lahaayeen.